I-Lactoperoxidase yendalo ye-antibacterial: Umsebenzi, isiCwangciso, ukuSebenza kunye nokuKhuselwa kweMichemke
I-Lactoperoxidase yendalo ye-Antibacterial: Umsebenzi, iNkqubo, ukuSebenza noKhuseleko
I-Lactoperoxidase (LPO), ifumaneka kumadlala amathe kunye namamariya, yinto ebalulekileyo yokuphendula komzimba kubalulekile ekugcineni impilo yomlomo. Eyona ndima ibaluleke kakhulu ye-lactoperoxidase kukukhulisa ii-thiocyanate ions (i-SCN−) ezifumaneka kumathe ebusweni be-hydrogen peroxide ekhokelela kwiimveliso ezibonakalisa umsebenzi we-antimicrobial. I-LPO ifunyenwe kubisi lwe-bovine ifakiwe kumzi-mveliso wezonyango, wokutya kunye nowezithambisi ngenxa yokusebenza kwayo kunye nokuma ngendlela efanayo kwi-enzymme yomntu.
Iimveliso zokucoca zomlomo zanamhlanje ziyatyetyiswa ngenkqubo ye-lactoperoxidase ukubonelela ngenye indlela ebalaseleyo yokuhlanjwa kwamazinyo omgangatho. Ngenxa yokusetyenziswa okubanzi kwe lactoperoxidase isongezelelo, ibango layo lenyuke kakhulu ukutyhubela iminyaka, kwaye isakhula.
I-Lactoperoxidase yinto nje ye-enoxme ye-peroxidase eveliswe kwi-mucosal, mammary, kunye namadlala amathe, asebenza njengearhente yendalo yokulwa neentsholongwane. Kubantu, i-encyme ye-lactoperoxidase ifakwe kwi-LPO gene. Le enzyme ihlala ifumaneka kwizilwanyana ezanyisayo, kubandakanya abantu, iimpuku, i-bovine, inkamela, inyathi, inkomo, ibhokhwe, u-Ilama, kunye neegusha.
I-LPO Yinto ye-arhente esebenzayo yokulwa izifo. Ukusetyenziswa kwe-lactoperoxidase ke, kusekwe kulo mgaqo. Isicelo se-lactoperoxidase apho ke sifumaneka ikakhulu kulondolozo lokutya, izisombululo zamehlo, kunye neenjongo zokucoca. Kwakhona, i-lactoperoxidase powder isetyenzisiwe ekunyangeni amanxeba kunye nonyango lwamazinyo. Ngaphaya koko, i-LPO yinto esebenzayo yokulwa intsholongwane kunye ne-anti-tumor. Ukuxoxwa ngezantsi kusetyenziso lwe-lactoperoxidase:
i. Umhlaza webele
Umhlaza we-lactoperoxidase Amandla okuphatha adityaniswa nokukwazi kwawo ukukhupha i-estradiol. Le oxidation ikhokelela kuxinzelelo lwe-oxidative kwiiseli zomhlaza webele. Umsebenzi we-lactoperoxidase apha kukwenzela uxinzelelo lweendlela zokuphendula ezikhokelela ekusetyenzisweni kweoksijini kunye nokuqokelelwa kwe-hydrogen peroxide ye-intracellular. Ngenxa yezi ziphumo, i-LPO ibulala ngokufanelekileyo iiseli ze-tumor in vitro. Kwakhona, ii-macrophages ezivezwe kwi-LPO zenziwa zitshabalalisa iiseli zomhlaza, zibabulala.
ii. Iziphumo zokulwa neentsholongwane
I-enzymme ye-LPO isebenza njengecandelo lendalo lenkqubo yezokhuselo yokungazikhuseli komzimba kwizilwanyana ezanyisayo kwaye inceda i-oxidation ye-thiocyanate ion kwi-antibacterial hypothiocyanate. I-LPO inokuthi ithintele ukukhula okuluhlu olubanzi lwee-microorganisms ngempembelelo ye-enzymatic ebandakanya i-thiocyanate ions kunye ne-hydrogen peroxide njenge-cofactors. Umsebenzi we-antimicrobial we-LPO uxhaswa kukuqulunqwa kwee-ion ze-hypothiocyanite ngokusebenzisa i-enzymes. I-Hypothiocyanite ions iyakwazi ukuphendula kunye ne-bacterial membranes. Bakwabangela ukuphazamiseka ekusebenzeni kwee-enzymes ezithile. I-Lactoperoxidase ibulala i-bacteria ye-Gram-negative kwaye ithintela ukukhula kunye nokukhula kwee-bacteria ze-Gram.
iii. I-Lactoperoxidase kwizithambiso
Umdibaniso we-lactoperoxidase powder, iglucose, thiocyanate, iodide,
kunye ne-glucose oxidase, kwaye bayaziwa ukuba bayasebenza kulondolozo lwezithambiso.
iv. I-Lactoperoxidase kubisi Lo ndolozo
Amandla e-lactoperoxidase kulondolozo lomgangatho olusulungekileyo wobisi oluluhlaza kangangexesha elinikiweyo sele lisungulwe kwimimandla eliqela kunye nezifundo zovavanyo olwenziwe kwimimandla eyahlukeneyo yejografi. Ulondolozo lwe-lactoperoxidase lungasetyenziselwa ukugcina ubisi olungavuwanga olufumaneka kwiintlobo ezahlukeneyo. Indlela esebenzayo ngayo indlela ixhomekeke kwizinto ezininzi. Ezi zinto zibandakanya ubushushu bebisi ngexesha lonyango, uhlobo lokungcoliseka yintsholongwane, kunye nenani lobisi.
I-Lactoperoxidase inefuthe le-bacteriostatic kubisi oluluhlaza lwebele. Idatha yophando kunye namava avela kwinto yokwenyani abonisa ukuba i-lactoperoxidase ingasetyenziselwa ngaphaya kwemida yeqondo lokushisa (15-30 degrees Celsius) ekubhekiswa kuyo kwisikhokelo se-codex yowe-1991. Ekupheleni komgangatho wobushushu, izifundo ezahlukeneyo zibonisa ukuba kusebenze i-lactoperoxidase unokulibazisa ukukhula kwentsholongwane ye-bacteria ye-psychrotrophic kwaye ke ukulibazisa ukuchitheka kobisi kwiintsuku ezininzi xa kuthelekiswa nefriji kuphela. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba injongo yokusebenzisa i-lactoperoxidase ayisi kukwenza ubisi lukhuseleke ekusetyenzisweni kodwa ukugcina umgangatho wayo wokuqala.
Ukuziqhelanisa nococeko olufanelekileyo kwimveliso yobisi kubalulekile ekusebenzeni ngempumelelo kwe-lactoperoxidase nakwimveliso yobisi lwe-microbiological. Ukukhuseleka kunye nokutsha kobisi kunokufumaneka kuphela ngokudibanisa ubushushu ngonyango lobisi kunye neendlela ezilungileyo zokuzicoca ezizimeleyo ezisebenzisa i-lactoperoxidase.
v. Eminye imisebenzi
Uphononongo lubonise ukuba ukongeza ekubeni ne-antiviral effect, i-Lactoperoxidase ikwazi nokukhusela iiseli zezilwanyana ukusuka kumonakalo ohlukeneyo kunye ne-peroxidation, kwaye ikwayinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokuzikhusela kwi-pathogenic microorganisms kwinkqubo yokugaya yeentsana ezisanda kuzalwa.
Yintoni inkqubo yeLactoperoxidase?
Inkqubo ye-lactoperoxidase (i-LPS) yenziwa ngezinto ezintathu, ezibandakanya i-lactoperoxidase, i-hydrogen peroxide, kunye ne thiocyanate (SCN¯). Inkqubo ye-Lactoperoxidase inemisebenzi yokulwa neebacteria kuphela xa ezi zinto zintathu zisebenza kunye. Ekusetyenzisweni kobomi bokwenyani, ukuba ingqokelela yento ethile kwinkqubo ayonelanga, kuya kufuneka kongezwe ukuze kuqinisekiswe ukuba akukho nto ichasene ne-bacteria, eyaziwa ngokuba yi-LPS activation. Phakathi kwabo, i-lactoperoxidase ye-concentration ayifanele ibe ngaphantsi kwe-0.02 U / mL.
Ingqokelela yendalo ye-lactoperoxidase kwindalo yobisi lwe-bovine yi-1.4 U / mL, enokuhlangabezana nale mfuneko. I-SCN¯ ifumaneka ngokubanzi kwiindawo ezikhuselekileyo kunye nezicubu zezilwanyana. Kubisi, ukudityaniswa kwe-thiocyanate kuncinci njenge-3-5 μg / mL. Le yinto yokuthintelwa komsebenzi weenkqubo ze-Lactoperoxidase. Kucetyisiwe ukuba i-thiocyanate efunekayo ukwenza ukuba inkqubo ye-lactoperoxidase ijikeleze i-15 μg / mL okanye nangaphezulu. Kungenxa yoko kufuneka songeze le thiocyanate exo native ukuze isebenze inkqubo ye-lactoperoxidase. Umxholo we-hydrogen peroxide ebisi, ekhutshelwe ngaphandle, yi-1-2 μg / Ml kuphela, kwaye ukwenziwa kwe-LPS kudinga 8-10 μg / mL ye-hydrogen peroxide. Kungenxa yoko i-hydrogen peroxide kufuneka inikezelwe ngaphandle.
Inkqubo ye-lactoperoxidase idlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yangaphakathi yokulwa izifo, inokubulala iintsholongwane kubisi nakumbindi we-mucosal kwaye inokuba nezicelo zonyango.
Kwimveliso yokutya neyononophelo lwezempilo, ukongezwa okanye ukwandiswa kwenkqubo ye-lactoperoxidase ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukulawula iibhaktheriya.
I-LPS iqulethe imveliso ye-anti-bacterial compact evela kwi-SCN¯catalysed yi-LPO phambi kwe-hydrogen peroxide. I-lactoperoxidase ekhankanyiweyo umsebenzi we-antimicrobial ifumaneka ngokwemvelo kulwelo oluninzi lomzimba njengejusi yesisu, iinyembezi kunye namathe. Izinto ezimbini ezibalulekileyo zenkqubo ye-antimicrobial, eyi-hydrogen peroxide kunye ne-thiocyanate, zikhona kubisi kwiindawo ezahlukeneyo zokuxinana, kuxhomekeka kuhlobo lwesilwanyana kunye nokutya okunikiweyo.
Kwibisi elitsha, isenzo se-antimicrobial asibuthathaka kwaye sihlala nje kangangeyure ezi-2 kuba ubisi kuphela sinamanqanaba angaphantsi kwe-hydrogen peroxide kunye ne-thiocyanate ion. I-Thiocyanate yongezwa eyenzelwe ukuba ivelise i-2 elektroni
I-Thiocyanate isebenza njenge-cofactor yenkqubo ye-Lactoperoxidase. Ngenxa yoko, inani lee-sulfhydryls ze-oxidized zizonke zizimele kwi-thiocyanate ion ngok
I-Liol moeches iyafumaneka
I-hydrogen peroxide eyaneleyo ikho
I-Thiocyanate okwangoku ayifakwanga kwi-amino acid enukayo
Ngenxa yoko, i-thiocyanate iphinda ivuselele isiphumo se-anti-bacterial yenkqubo ye-lactoperoxidase kubisi olutsha. Oku kwandisa ubomi beshelufu yobisi obutsha phantsi kweemeko ezishisayo kwiiyure ezisixhenxe ukuya kwezisibhozo.
Ukusetyenziswa kweLactoperoxidase / Ukusetyenziswa
i. Isenzo seAnti-gciwane
Umsebenzi we-anti-microbial wenkqubo ye-lactoperoxidase ubonwa kwisenzo se-bactericidal kunye ne-bacteriostatic sezinye iintsholongwane ezifumaneka kubisi oluluhlaza. Umatshini wayo wokubulala iintsholongwane usebenza kwiqela le-thiol elifunyenwe kwi-plasma cell membrane ye-oxidized. Oku kukhokelela ekutshatyalalisweni kwesakhiwo se-plasma membrane ekhokelela ekuvuvukeni kweepolypeptides, i-potionsum ion, kunye ne-amino acid. Ukuthathwa kwe-purines kunye ne-pyrimidines, iglucose, kunye ne-amino acid ziiseli kuthintelwe. I-Synthesis ye-DNA, i-RNA, kunye neeproteni nazo zithintelwe.
Iibhaktheriya ezahlukileyo zibonisa amaqondo ahlukeneyo obuntununtunu kwinkqubo ye-lactoperoxidase. Intsholongwane yeGram-negative, enjengeSalmonella, iPseudomonas, ne-Escherichia coli, zithintelwe kwaye zabulawa. Iibacteria ze-lactic acid kunye neStreptococcus zithintelwe kuphela. Ukutshutshiswa kwezi ntsholongwane yinkqubo ye-lactoperoxidase kubangela ukuvuza kwezinye izondlo, ukuthintela iintsholongwane ukuba zingangeni kwizondlo, kwaye oku kukhokelela ekwehleni okanye ekubulaweni kweentsholongwane.
ii. Unyango lweparadentosis, i-gingivitis, kunye nokubulala iiseli zesisu
I-LPS Kukholelwa ukuba uyasebenza kunyango lwe-gingivitis kunye neparadentosis. I-LPO isetyenzisiwe kwilizwi lokuhlamba ukucoca iibacteria zomlomo kwaye, ngenxa yoko, yi-acid eveliswa zezi bacteria. I-antibody conjugates yenkqubo ye-lactoperoxidase kunye ne-glucose oxidase ibonakalisile ukuba iyasebenza ekutshabalaliseni kwaye ngenxa yoko yabulala iiseli ze-tumor kwi-vitro. Kwakhona, ii-macrophages eziboniswe kwinkqubo ye-lactoperoxidase zenziwa zitshabalalisa kwaye zibulale iiseli zomhlaza.
iii. Unonophelo lomlomo
Izifundo ezahlukeneyo zeklinikhi ezichaza ukusebenza kwe-LPS kunyango lwamazinyo sele zibhaliwe. Emva kokubonisa ngokungangqalanga, kusetyenziswa ukulinganisa kweemeko zokuvavanywa kwee-caries, ukuba i-lactoperoxidase yamazinyo aqukethe i-amyloglucosidase (γ-amylase) ineziphumo ezihle ekunakekelweni komlomo. Ii-enzymes ezinjengeglucose oxidase, i-lysozyme, kunye ne-lactoperoxidase zidluliselwa ngqo ukusuka kwindawo yamazinyo ukuya kwi-pellicle.
Ukuba zizinto zepellicle, ezi enzymes zisebenza ngokusebenzayo kakhulu. Kwakhona, i-LPS inefuthe eliluncedo lokuthintela ngokuchasene neengcingane zobudala bokuqala ngokuthoba inani leekoloni ezenziwa yi-cariogenic microflora njengoko isandisa uxinzelelo lwe-thiocyanate.
Kwizigulana ze-xerostomia, I-lactoperoxidase yamazinyo ingaphezulu xa ithelekiswa ne-fluoride yamazinyo xa kuziwa ekubunjweni komdaka. Ukusetyenziswa kwe-LPS ayikhawulelwanga kwi-periodontitis kunye ne-caries. Umdibaniso we-lactoperoxidase kunye ne-lysozyme inokusetyenziswa kunyango lwesifo somlomo esivuthayo.
Xa i-LPS idityaniswa kunye ne-lactoferrin, le nhlanganisela idibanisa ne-halitosis. Xa i-LPS idityaniswa nge-lysozyme kunye ne-lactoferrin, i-LPS inceda ekuphuculeni iimpawu ze-xerostomia. Kananjalo iigels ezinenkqubo ye-lactoperoxidase ziyanceda ukuphucula iimpawu zomhlaza womlomo xa ukuveliswa kwamathe kungathinteleki ngenxa yokuntywila.
iv. Ukuphucula amajoni omzimba
I-Lactoperoxidase umsebenzi we-antimicrobial Dlala umsebenzi obalulekileyo kwinkqubo yomzimba yokuzikhusela. I-Hypothiocyanite yinto esebenzayo eveliswa ngumsebenzi we-lactoperoxidase kwi-thiocyanate. I-hydrogen peroxide iveliswa ziiprotein ze-Duox2 (ii-oxidase ezimbini 2). Ukufihlwa kwe-Thiocyanate kwizigulana ezine-cystic fibrosis kuncitshisiwe. Oku kukhokelela ekunciphiseni kwemveliso ye-antimicrobial hypothiocyanite. Oku kunegalelo kumngcipheko ophezulu wosulelo lomoya.
I-LPS inqanda i-helicobacter pylori ngokufanelekileyo. Kodwa kumathe omntu apheleleyo, i-LPS ibonakalisa ubuthathaka bokulwa neentsholongwane. I-LPS ayihlaseli iDNA kwaye ayisiyo mutagenic. Kodwa, phantsi kweemeko ezithile, i-LPS inokubangela uxinzelelo oluncinci lwe-oxidative. Kuqinisekisiwe ukuba ubukho be-LPO kubukho be-thiocyanate bunokubangela iziphumo ze-cytotoxic kunye ne-bactericidal ye-hydrogen peroxide phantsi kweemeko ezithile, kubandakanywa xa i-H2O2 ikhoyo kumxube wokuphendula ngaphezulu kwe-thiocyanate.
Ukongeza, ngenxa yokuba inamandla kwaye isebenza ngokuchanekileyo iipropathi ze-antibacterial kunye nokuxhathisa okuphezulu kobushushu, isetyenziswa njengearhente yokulwa izifo zokunciphisa uluntu lwebhakteriya kwimveliso yobisi okanye yobisi kunye njengesalathiso sobisi lwe-pasra-pasteurization. Ngokusebenza kwenkqubo ye-lactoperoxidase, ubomi beshelufu lobisi obuluqokelelweyo bunokwandiswa.
Kwaye, i-hypothiocyanate eveliswe lactoperoxidase inokusetyenziselwa ukuthintela intsholongwane ye-herpes simplex kunye neentsholongwane zokugonyelwa komntu emzimbeni.
Ngaba ikhuselekile kwimpilo yabantu nasezilwanyaneni?
Ishumi elinesihlanu leminyaka lezifundo zentsimi kumazwe asaphuhlayo nasaphuhlayo aqhutywa kwaye avavanywa yi-FAO / WHO JECFA (IKomiti yeengcali ezihlanganisiweyo kwizongezelelo zokutya). Emva kokuba ezi zifundo zinzulu kwaye zibanzi zigqityiwe, ukusetyenziswa kwenkqubo ye-lactoperoxidase kulondolozo lobisi kuvunywa yi-FAO / WHO JECFA (IKomiti yeengcali kwezongezo zokutya). Iingcaphephe zikwachaze le ndlela njengekhuselekileyo kwimpilo yabantu nasezilwanyaneni.
I-LPS yindawo yemvelo yejusi yesisu kunye namathe ebantwini kwaye, ke, ikhuselekile xa isetyenziselwa ukubambelela kwizikhokelo zeKhomishini yeCodex Alimentarius. Le ndlela ayichaphazeli izilwanyana ezixhaphayo nantoni na. Kungenxa yokuba unyango lwenziwa kuphela emva kokuba ubisi lukhutshwe emngxunyeni.
Kuyabonakala kwingxoxo yethu ukuba inkqubo ye-lactoperoxidase kunye ne-lactoperoxidase isebenza kakuhle kwaye iluncedo kakhulu kuluhlu olubanzi lwezicelo. Ukuba ujonge ukwenza into egqibeleleyo I-lactoperoxidase ithenge kuphando lwakho okanye ukukhula kweziyobisi, jonga phambili. Sinokwazi ukuqhubekekisa iiodolo ze-lactoperoxidase ngexesha elifutshane kakhulu kwaye sizithumele e-US, Europe, Canada, nakwamanye amazwe ehlabathi. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.
IJantschko, PG Furtmüller, M. Allegra et al., "IRedox ephakathi izityalo kunye ne-mamalia peroxidases: Ufundisiso lwexesha elincinci-kinetic lokusebenza kwakhona kwizenzo ze-indole derivatives," Oovimba bebhayoloji kunye Biophysics, vol. 398, hayi. 1, iphe. 12–22, 2002.
I-Tenovuo JO (1985). "Inkqubo ye-peroxidase kwimisebenzi yabantu." Kwi-Tenovuo JO, Prut KM (ed.). Inkqubo ye-Lactoperoxidase: i-chemistry kunye nokubaluleka kwebhayoloji. ENew York: Dekker. p. 272.
UThomas EL, Bozeman PM, Funda i-DB: I-Lactoperoxidase: ulwakhiwo kunye neepropathi ezinokubambisa. I-Peroxidases kwi-Chemistry kunye ne-Biology. Ihlelwe ngu: Everse J, Everse KE, Grisham MB. Ngo-1991, iBoca Raton, FL. I-CRC Press, 123-142.
Wijkstrom-Frei C, El-Chemaly S, Ali-Rachedi R, Gerson C, Cobas MA, Forteza R, Salathe M, Conner GE (Agasti 2003). "I-Lactoperoxidase kunye nokukhuselwa komhambi wendiza yomoya". Ndingu. J. Respir. Iseli Mol. Ibhayol. 29 (2): 206–12.
UMikola H, uWaris M, uTenovuo J: Inhibition ye-herpes simplex virus hlobo 1, intsholongwane yokuphefumla, kunye nohlobo lwe-echovirus 11 yi-hypoxocyanite eyenziwe nge-peroxidase. Indawo yokubulala iintsholongwane. 1995, 26 (2): 161-171.
IHaukioja A, Ihalin R, uLoimaranta V, uLenander M, iTenovuo J (ngoSeptemba 2004). "Ubuntununtunu beHelicobacter pylori kwindlela yokhuseleko yangaphakathi, inkqubo ye-lactoperoxidase, kwi-buffer nakwi-mate epheleleyo yabantu". Ijenali yeMedical Microbiology. I-53 (Pt 9): 855-60.
5.Ukusetyenziswa kweLactoperoxidase / Ukusetyenziswa
6. Ngaba kukhuselekile kwimpilo yabantu kunye nezilwanyana?